747-8 Auto Spoilers amin'ny fandevenana
fanontaniana 747-8 Auto Spoilers amin'ny fandevenana
8 volana 4 andro lasa izay - 8 volana 3 andro lasa izay #1312 by mikeyjames
Voalohany indrindra, tena mankasitraka ireo modely goavana aho.
Ao amin'ny 747-8, sy ny hafainganam-pandehan'ny 747 nalefako etsy ambany, ny auto-spoiler dia tsy mipetraka amin'ny tany. Raha toa ka mihodina + / / ny sambo mpandroba amin'ny roapolo roapolo dia mihetsiketsika araka ny diplaoma FSX 747-400, izay toa milaza fa mitam-piadiana izy io, saingy tsy mipetra-potsiny. Toa fotsiny ny miara-miasa amin'ny 747-400. Ny fiovaovana, na ny fampiasana ny 747-400 miaraka amin'ny fanodinana hafa aza dia miteraka amin'ny tsy fametrahana ny auto-spoiler amin'ny landing.
Moa ve izany olana iraisana izany sa manao zavatra tsy mety?
Raha olana izany, sa zavatra mety ho mora foana amin'ny farany?
Na izany na tsy izany, tsy horonantsary lehibe izany ary raha toa ka ny toe-javatra ratsy indrindra dia ny hametrahako ny mpitsikilo amin'ny tanety no eritreretiko fa ho velona aho.
Fanovana farany: 8 volana 3 andro lasa izay by mikeyjames.
7 volana 6 andro lasa izay #1349 by Gh0stRider203
inona ny habetsaky ny fahita eo amin'ny tendanao matetika? misy hevitra? Fantatro fa indraindray dia tsy hapetrak'izy ireo raha toa ka mavesatra loatra ny landing ... na koa lazaina aho. Tsy mbola nanana olana mihitsy aho tamin'io.
Fotoana mamorona pejy: 0.247 segondra